သန့်စင်ခန်း ဋီကာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » သန့်စင်ခန်း ဋီကာ
Posted by YingLamp on Jul 20, 2012 in My Dear Diary | 14 comments
နေ ့စဉ် ထိတွေ ့နေရတဲ့ထဲမှာ သန် ့စင်ခန်းက အရေးအကြီးဆုံးပဲ .. သန် ့စင်ခန်းဆိုတာ သန့်စင်ရင် တော်ဘီပေါ့ .. သူတကာထက် လွန်နေတော့လဲ ဒီလိုတွေ နာမည်ပေးပစ်လိုက်တယ် ..
မိုနီဘုန်းလမ်းပေါ်က ကော်ဖီဆိုင်တဆိုင်က ပြင်သစ်ဆိုင်။ တဆိုင်လုံးရဲ့ အပြင်အဆင်ကလဲ တော်တော်လေးကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်။ ဆိုင်အပြင်အဆင်တင် ဆွဲဆောင်မှုရှိတာမဟုတ် အိမ်သာကိုလဲဝင်ကြည့်ဦး။ အဲ့ဆိုင်ရောက်တိုင်း အိမ်သာကို သွားချင်ချင်မသွားချင်ချင် တခါတော့ ဝင်ဖြစ်အောင်ဝင်လိုက်ချင်တာပဲ။ ကျုပ်တော့ ပန်းအိမ်သာ လို ့ခေါ်တယ်ဗျာ။ ကြည့်လေ။ အိမ်သာခန်းအကျယ်ကိုက ငါး×တဆယ် ပတ်လည်လောက်ရှိမယ်၊ ပန်းရုံလေးတွေ ပန်းရုံလေးတွေဆိုတာ အခန်းပတ်ပတ်လည်မှာ လှလှပပကိုစိုက်ထားတာဗျာ။ ဖြူနီစိမ်းပါပြာ အရောင်စုံ မွေးရနံ့စုံပဲ ။ ဘယ်လောက်ထိမွှေးသလဲဆိုရင် ပန်းအနံ့ကလွဲလို ့ဘာအနံ့မှကိုမရတာ။ အိမ်သာသွားရတာနဲ့တင် အဲ့ဆိုင်က ကော်ဖီဈေးကြီးတာ တန်သဗျာ။
အိပ်ခန်းအိမ်သာလို့နာမည်ပေးရခြင်းက တကယ့်ကိုအိပ်ခန်းတခန်းလောက်ကို အကျယ်ကြီး။ အဲဒါက ဘုန်းကြီးကျောင်းက ဓမ္မာရုံတခုထဲက အိမ်သာပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းပေမယ့် အိမ်သာက တယ်လဲခန်းနားသကိုး။ အိမ်သာအခန်းတခန်းရဲ့အကျယ်က ကျုပ်တို ့ရန်ကုန်တိုက်ခန်းက မိသားစုအိပ်ခန်းတခန်းစာလောက်ကိုရှိတယ်။ တံခါးဖွင့်ဝင်ပြီး အိမ်သာခွက်နားထိရောက်ဖို ့ဆိုတာ အဝေးကြီးပါ့။ တခန်းလုံးမှာ ရေချိုးခန်းနဲ့တွဲထားတာမျိုးလဲမဟုတ်ပဲ အခန်းကြီးကိုကကျယ်နေတာ။ နို့ပေမယ့် မီးဆိုင်းကတော့ အိမ်ခန်းတွေထဲမှာတပ်သလို မီးဆိုင်းလို လှတပတကြီးပေါ့။ နံရံတွေကလဲ အိပ်ခန်းနံရံတွေလိုပဲ လှချက်။ အခန်းကြီးကကျယ်ပြီး အထဲမယ် အိမ်သာခွက်ရယ် ဘေစင်ရယ်လွဲလို့ဘာပရိဘောဂတွေမှမရှိတော့ အသံတွေက ပဲ့တင်တောင်ပြန်နေသလိုပဲ။
တောင်ပေါ်ပြန်တုန်းက လမ်းခုလတ် မြို့တွေနဲ့အတော်လေးဝေးတဲ့နေရာတခုမယ် ကားရေဆေး၊ ရေဖြည့်တဲ့နေရာလေးတခုရှိတယ်။ ဆိုင်ခပ်သေးသေးလေးတခုရယ်၊ ရေပိုက်တွေသွယ်ထားတဲ ့ရေတွင်းတတွင်းရယ်၊ ဂျမ်းတုန်းတွေရယ်။ ပြီးတော့ အိမ်သာတလုံးကို မြင်သာအောင် တည်ထားတယ်။ ခရီးဝေးသွားနေရင်းလမ်းခုလတ်မယ် ဆိုင်မြင်တော့ ဝင်နားရာကနေ အဲ့အိမ်သာရောက်ဖူးခဲ့တာပဲ။ အိမ်သာက အောက်မှာ ရေတံခွန်ရှိသဗျ။ အသံကလဲ ရေတံခွန်တခုရဲ့အသံအတိုင်း ရေတွေတဝေါဝေါနဲ့စီးဆင်းနေတဲ့အသံ။ အဲ ငုံကြည့်လို ့ရတယ်နော်။ ငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ လားလား ရေတံခွန်မှ ရေတံခွန်အစစ်။ တွင်းကြီးကလဲ အနက်ကြီး။ အသဲကို အေးသွားတာပဲ။ ရဲရဲမလှုပ်ရဲတော့ဘူး။ မတော်ကျွံကျမှဖြင့် ဘဝတုံးရချည့်။ ရေတံခွန်အသေးစားလေးပေါ့ဗျာ။ ကိစ္စပြီးရင် ရေလောင်းစရာမလိုအောင်ပဲ ရည်ရွယ်ခဲ့သလားတော့မသိ။
မန်းလေးမယ် သုံးထပ်ရေတံခွန်တဲ့။ ရောက်ဖူးခဲ့ပါဘီ။ ထုံးစံအတိုင်း ရောက်လေရာအိမ်သာဝင်လေ။ ဒီလိုအိမ်သာမျိုးကတော့ တခါတခါ မြန်မာဗီဒီယိုတွေထဲမယ်တော့ တွေ့ဖူးတယ်။ အခုတော့ ကိုယ်တွေ ့ပေါ့ဗျာ။ အိမ်သာက ပီနံအိတ်ကိုဖြတ်ပြီး သုံးဖက်ကာထားတယ်။ ပီနံအိတ်အနားစလေးတွေကလဲ ဖွာလန်ကြဲလေးတွေပေါ့။ တံခါးက ရှယ်တံခါးဗျ။ တာလဘတ်ကိုဖြတ်ပြီး သစ်သားဘောင်မှာ တပ်ထားတယ်။ တံခါးက အိမ်သာနဲ့တွဲထားတဲ့ပတ်တာမပါတော့ ပုံမှန်ဖွင့်ပိတ်သလိုလုပ်လို့မရဘူး။ တာလဘတ်စ ကပ်ထည့်ထားတဲ့ အဲဒီသစ်သားဘောင်ကို မ’ပြီးရွေ ့ရတယ်။ ဘေးကိုရွေ ့ထားပေါ့။ လူကအထဲကိုဝင်။ လူက အထဲရောက်တော့ အဲဒီသစ်သားဘောင်ကို ပြန်မ’ရွေ ့။ ကဲ မပိုင်လား။ တည့်အောင်ရွေ ့။ လုံအောင်ရွေ ့ဖို ့တော့လိုသပေါ့လေ။ ပိုဆိုးတာက အကာတွေနဲ ့တံခါးက ပုနေတာပါပဲ။ မြင်နေရတယ်။ အားလုံးကို။ ဒီ့ထက်ပိုဆိုးတာက အိမ်သာက လူသွားလမ်းဘေးကပ်ရပ်။ ထိုင်နေတာတောင် ကိုယ့်မျက်နှာကြီး လမ်းသွားလမ်းလာတွေကမြင်နေရပါရောလား။ အိမ်သာထဲရောက်ပြီးကာမှ ထွက်ပြေးလာမိတာ ကျုပ်အပြစ်လားဗျာ။
ဂဏန်းကင်ဆိုင်ကအိမ်သာကျတော့ တူးအင်ဝမ်းဗျ။ ကျားအိမ်သာနဲ ့မ အိမ်သာကိုခွဲထားပါရဲ ့။ မ အိမ်သာမှာ ဘေစင်မရှိဘူး။ အိမ်သာအပြင်မှာလဲ ဘေစင်မရှိဘူး။ အိမ်သာပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးလဲ ဘေစင်မရှိဘူး။ ဘေစင်က တလုံးထဲရှိတယ်တဲ့လေ။ အဲဒီတလုံးထဲသော ဘေစင်က ကျားအိမ်သာထဲမှာပဲရှိတယ်တဲ့လေ။ ကဲ။ နို်းချွိုက်စ်။ မိန်းမလေးတွေ လက်ဆေးချင်ရင်တော့ ကျားအိမ်သာထဲဝင်ဖို ့ကြိုးစားရတော့တာပါပဲ။ ဆိုးချက်က ကျားအိမ်သာက တံခါးက ဆင်နားရွက်တံခါးဗျို ့။ အထဲနဲ့အပြင်က ဗွင်းဗွင်းကြီးပေါ့ဗျာ။ ကျားအိမ်သာကများ အထဲမယ် လူရှိနေလို ့ကတော့ အိမ်သာအပြင်ကနေ ရှေ ့မျက်နှာနောက်ထားပြီးသာ စောင့်ပေတော့ မိန်းခလေးရေ။
မှန်ကြိုက်တဲ့ ကိုကိုမမ ဦးဦးဒေါ်ဒေါ်တို့အတွက်တော့ သွားလေရာမှန်ကြည့်နိုင်ပေမယ့် အိမ်သာတက်နေတဲ့အချိန်တော့ မှန်ကြည့်ဖို ့သတိရချင်မှရမယ် ထင်တယ်။ ဆိုင်တခုက အိမ်သာကတော့ တခန်းလုံးမှန်တွေတပ်ထားတယ်။ ကြေးမုံတွေပေ့ါ။ တခန်းလုံးကြေးမုံတပ်ထားတာ သိပ်မထူးဆန်းပေမယ့် ဘိုထို်င်အိမ်သာ ရှေ့တည့်တည့်မယ် ကိုယ်လုံးပေါ်မှန်ကြီးတပ်ထားတာများဗျာ ရှေ ့တည့်တည့်ဆိုမှ တကယ့်ရှေ့တည့်တည့်မှာတပ်ထားတာဗျာ စဥ်းစားသာကြည့်ပေတော့ …
ဒါတွေကတော့ ကျုပ်ဘဝမယ် မှတ်မှတ်ရရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်သာခေါ် သန့်စင်ခန်းတွေထဲက အချို ့ပေါ့ဗျာ … ဒီဇိုင်းစုံ အမျိုးစုံပါပဲ ..
ဘော်ဒါဘော်ကျွတ်တို ့လဲ အိမ်မှာ အိမ်သာဒီဇိုင်းလေးများအတွက် အိုင်ဒီယာရသွားဘီ .. ကြိုက်တာယူပါ .. စမ်းကြည့်ပါ …
အဟီး … အိမ်သာတွေကို လေ့လာမိတဲ့ လူ …. နောက်တစ်ယောက်တိုးလာပါလားနော် … ။
အဖော်ရပြီ …. .ဟီးဟီး …. ။
ကြေးမုံအိမ်သာဆိုလို့ … အဲ့ဒါမျိုး ကြုံဖူးပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်ကတော့ မှတ်မှတ်ရရရှိခဲ့ဖူး ပါတယ် … မျက်နှာခြင်းဆိုင်က နံရံမှာ မှန်တွေကပ်ထားတာပါ …. အိမ်သာ အပေါ် မျက်နှာကျက်ကစလို့ကြမ်းခင်းအထိမြင်နေရတာမျိုးပေါ့ …. ။ သံသယများတဲ့ ကျွန်မက … မလုံမလဲ ဖြစ်မိလို့ … မျက်နှာချင်းဆိုင်က မှန်ကို တဖက်မြင်မှန်လား .. နှစ်ဖက်မြင်မှန်လား … စမ်းကြည့်မိသေးတယ် …. တဖက်မြင်မှန်ဆိုတာ သေချာတော့မှ စိတ်ချလက်ချ အိမ်သာသုံးရဲတယ် … ။
ကိုယ့်မိသားစု ဆွေးမျိုးသားချင်း အိမ်မဟုတ်တဲ့ … အိမ်သာတွေရောက်တိုုင်း .. အိမ်သာရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချမှုကို …. အရင်ကြည့်ပြီးမှ အိမ်သာ အသုံးပြုလေ့ရှိတာကြောင့်ပါ . ။
အနော်ဆို ဆူးလေမြို့တော်ခန်းမနားက မိုဘိုင်းအိမ်သာဆို မသွားရဲဘူး
ပြီးတော့ မြို့တော်ခန်းမကြီးကို မျက်နှာမူရက်ကြီး
သန် ့သန် ့ရှင်းရှင်းနဲ ့
လုံလုံခြုံခြုံ နဲ ့
မြို့ကြီးသားတွေ စည်းစိမ်ခံစားပုံများ လက်ဖျားခါလောက်တယ်
လယ်ထွန်ပြီးမှ ထမင်းစားရမယ်ဆိုရင်တော့ ခက်ရချည်ရဲ့
တံတားပေါ်ကနေ ချောင်းထဲကို ပလုံချတယ်
လူလိုမသုံးတဲ့ လူအညံ့စားတွေကြောင့် စိတ်ညစ်ကြရပါတယ်…။
မိမိကိစ္စပြီးရင် ဒီအတိုင်း ထသွားတတ်တဲ့လူမျိုးတွေအတွက်တော့ ရထားလမ်းဘေးက ပိုသင့်တော်ပါတယ်…။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ အရေးတကြီးအမှန်တကယ်အလိုအပ်ဆုံးကတော့ နေရာတိုင်းမှာ သန့်ရှင်းတဲ့ အိမ်သာတွေပဲ…..ကျွန်တော်လဲ အိမ်သာကိုတော့ အလွန်ဂရုစိုက်တယ်။ တနေ့ကို အစားကသာ သုံးခါလောက် စားတာ… အပေါ့က 10=ခါလောက်သွားရတယ်။
မြန်မာပြည်မှာကတော. အများသုံး အိမ်သာကို ဘိုထိုင်ထက် ဗမာထိုင်မျိုးကို သန်.သန်.ရှင်းရှင်းလေး ထားပေးရင် ပိုသင်.တော်မယ်ထင်တာပဲ၊ ဘိုထိုင်တွေက မသုံးတတ်ကြတော. ထိုင်ချင်စရာတောင် မရှိဘူး၊ (ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ shopping centreတွေ၊ airport လို နေရာတွေ) မထိုင်နိုင်တဲ. လူကြီးတွေအတွက်တော. ဘိုထိုင်မှ အဆင်ပြေပြန်ရော။
မသွားမဖြစ်သွားရတဲ့ နေရာမို့ သန့်ရပ်သန့်ရှင်းဖို့
သုတေသန ပြုထားတာပါကလား …
အပေါ်ဆုံးက ဂျီးဒေါ်လည်း အဲ့ဒီလို ရေးခဲ့ဖူးသဗျ ..
ညဖက်ကြီး သွားတက်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး …
အဲ့လို သတ္တိရှိဒါ …
ဦးလေး/ကြီးဒေါ် (အဒူမှန်းမတိရို့) ကင်မလာ အိမ်သာလေးအကြောင်း ရေးပါဦး
….. ကိစ္စပြီးရင် ရေများများလောင်းပါ……… ရုံးတစ်ရုံးမှာ အိမ်သာနဲ့ရုံးခန်းမှားကပ်ထားတဲ့အကြောင်း fb မှာဖတ်ဖူးတယ်
အိမ်သာလို့ဆိုကာမှပြောဖို့သတိရတယ်။ လူတွေများတယ်ခက်တော့သကိုး … ချီးပါရင် ချီးပဲကောင်းကောင်း ပါတာမဟုတ်ဘူး။ ပုံလေးတွေဆွဲချင် စာလေးတွေရေးချင်ကြတာနဲ့ … အဲ့ဒါမျိုးသိပ် အမြင်ကပ်တယ်။ နောက်ဆို အိမ်သာမှာ စာကပ်ထားရမယ် “ချီးတင်ပါ ပါ” ဆိုပြီလေ :-)
တစ်ချို့ကလဲ အိမ်သာကို ကိုယ့်ကိစ္စပြီးရင်ပြီးရော
အန္ဒိယနိုင်ငံ Luck nowမြို ့က ဘူတာရုံကြီးကတော့ ထူးရှယ်အိမ်သာကြီးဘဲဗျ။
ရထားရပ်မှများ အန္ဒိယသားတွေ အတော် အိးပါချင်ပုံရတယ်။
မြေကြွက်ကြီးတွေကလည်း အကြီးကြီးတွေ၊ သူတို့တွေကတော့ အနံ့မရသလို အေးဆေးဘဲ။
အနော် အဲလောက်တော့ မခံစားနှိုင်လို့ အပြင်ပြန်ထွက် အသက်ရှုခဲ့ရပါကြောင်း။
“ကားအိမ်သာ” တော့ တယ်သဘောခွေ ့သဗျို့.. ဘတ်စကားကြီးတစီးလုံးကို အထဲမယ် အိမ်သာခန်းတွေဖွဲ ့ပြီး ပက်ဘလစ်အိမ်သာလုပ်ထားတာ .. အထဲက အိမ်သာခန်းတွေက သန် ့တယ်ပြောလို ့ရတယ် … ယောက်ျားလေးတွေက ကားရဲ ့အနောက်ပေါက်က ဝင်ရပြိး မိန်းမလေးတွေကတော့ ကားဘေးက ဝင်ပေါက်ကနေ ဝင်ရတယ် .. ကျား၊ မ တခြမ်းစီ အလယ်ကနေခွဲထားပုံရတယ် .. အဲ့ဘတ်စကားကြီးက ရုံးချိန်လိုပဲ .. မနက် မနက်ဆို မြို့ထဲက သူ့ရပ်ရမယ့်နေရာမှာလာရပ်တယ် .. ညနေကျ ကားပြန်သိမ်းတယ် .. ကြည့်ရတာ အိမ်သာကားလဲ အုံနာနဲ့ပဲတူတယ် .. ညန်မာပြည်မှာလဲ ( ပန်ပန် ပြောသလို ) ရန်ကုန်က ဆူးလေမယ် မြို့တော်ခန်းမကြီး မျက်နှာမူပြီး အိမ်သာတက်ရတာထက်စာရင် အဲလို ကားအိမ်သာနဲ့ စမတ်ကျကျ အီးပါလို ့ရအောင် ကားအိမ်သာ လာထောင်စားရင်ကောင်းမယ်နဲ့တူတယ် ..